‘जय शम्भु’ प्रोमो : बर्षाका लागि अनुप र प्रशान्त भिडे ! « Ramailo छ
‘जय शम्भु’ प्रोमो : बर्षाका लागि अनुप र प्रशान्त भिडे !
प्रकाशित मिति : Jul 29, 2018
समय : 5:39 pm
फिल्म ‘जय शम्भु’ को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । प्रोमोबाट फिल्म एक्सन प्रदान रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रोमोमा अनुप विक्रम शाही र प्रशान्त ताम्रकारबिच घमासन द्धन्द्ध छ । अनुप र प्रशान्तको बिचमा नायिका बर्षा सिवाकोटी परेको देखिन्छ । प्रोमो हेर्नुस् :
रुपेश तामांग निर्देशित फिल्म ‘जय शम्भु’ को प्रदर्शन मिति भदौ १ गतेलाई तोकिएको छ । शिक्षा काफ्लेको कथा रहेको फिल्ममा चक्र तामांग कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेका छन् । फिल्मका निर्माता अरन्द्रिमान शाक्य हुन् ।
सह निर्मातामा शिक्षा र कुशल शर्मा छन् । फिल्ममा अनुप, प्रशान्त र बर्षासँगै रोशन मर्हजन, करुणा, पाण्डेको अभिनय छ । संगीत टंक बुढाथोकीले दिएका छन् । फिल्मको द्धन्द्ध निर्देशन श्री श्रेष्ठ र कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेले गरेका छन् ।